Saafi Films - News: Xildhibaanada Baarlamanka oo ku qulqulaya Iskoolo Bulusiyo oo lagu qabayo doorashada madaxweynaha dalka
Xildhibaanada Baarlamanka oo ku qulqulaya Iskoolo Bulusiyo oo lagu qabayo doorashada madaxweynaha dalka
Garoonka dayuuradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta Xalane oo talis u ah ciidamada AMISOM ayaa waxaa basas gaar ah looga qaaday Xildhibaano, Wariyeyaal iyo marti sharaf kala duwan oo halkaas ku soo aruuray, kuwaasoo la geeyey xarunta Iskoolo Buluusiyo oo saaka lagu qabanayo doorashada madaxaweynaha cusub ee dalka.
Xildhibaanada iyo dadka kale ee goob jooga ka noqonaya doorashada ayaa waxa loo sameeyey kaarar aqoonsi AH oo loogu talo galay in lagu galo xarunta Isoolo Buluusiyo oo doorashada ay ka dhaceyso goor dhow.
Doorashada maanta ayaa waxaa ka qeyb galaya goob joogayaal caalami ah oo kala socda dalalka beesha caalamka ee daneeya arimaha Somalia iyo ururada caalamiga ah si ay isha ugu hayaan qaabka dooraashadaas ay u dhaceyso, waxaana jawiga saaka uu yahay mid aad uga duwan kii hore.
Inkastoo doorashada madaxweynaha ay ka qeyb galayaan 24 musharax ayaa waxaa si weyn loo hadal hayaa iney codadka ugu badan heli doonaan dhowr musharax oo uu ku jiro madaxweynihii ugu dambeeyey ee dowlada KMG ah, Shariif Shiikh Axmed, Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo rag kale oo aan ka liidan, waxaana dadweynuhu ay hadal hayaan qofka doorashada ku soo bixi doona iyagoo saadaal kala duwan bixinaya.
Guddiga doorashada ayaa sheegay in codeynta iyo ku dhawaaqida natiijada ay isla maanta dhaceyso ayna doorashada si weyn ugu diyaar garoobeen, waxayna xuseen ilaa xalay ay shaqo adag hayeen oo aysan hurdo gama� ka siin, iyagoo diyaarinayey howlo farsamo oo doorashada ku saabsan.
La soco wixii soo kordha insha allaah.
nasro on September 10 2012 ·
4,931,381 unique visits